ဒီတပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကမှာ သုံးနှုန်းနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းတချို့ ဖြစ်တဲ့ Hung out to dry, Play into one’s hand နဲ့ Give more clout နဲ့ တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Hung out to dry
Hung out (အပြင်မှာထုတ်လှမ်းတာ)၊ to dry (ခြောက်သွေ့အောင်) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ခြောက်သွေ့အောင် အပြင်ထုတ်လှမ်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုနေတဲ့အဝတ်ကို ခြောက်အောင် အပြင်ကြိုးတန်းပေါ်မှာ နေထုတ်လှမ်းရသလို၊ အလှမ်းခံရတဲ့အ၀တ်ဟာလဲ လေတိုက်ရာဟိုဘက်လွင့် ၊ ဒီဘက်လွင့်ဖြစ်နေတဲ့ပုံရိပ်လိုဘဲ၊ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က လူတယောက်အနေနဲ့ ဒုက္ခတွေ ဝေနေတဲ့အချိန်မှာ သူ့ ကို ကယ်တင်မယ့်သူ မရှိဖြစ်နေတာ၊ ဒုက္ခထဲကနေ ရုန်းထွက်နိုင်အောင် အားကိုးရမယ့်လူ မရှိဘဲ ၊ ကျမတို့မြန်မာဘန်းစကားအရဆို ယက်ကန် ယက်ကန်ဖြစ်နေတာကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းတော့အရေးကြုံလို့ကယ်မယ့်သူ မရှိတာ၊ ဖေးမမယ့်သူ မရှိတာ၊ အားကိုးရာမဲ့ဖြစ် နေရတဲ့ အခြေအနေရောက်တာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို သမတ Doanld Trump ရဲ့ အနီးကပ်အကြံပေးတွေက ရုရှားနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ သတိထားဖို့ ပြောဆိုဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ကြပေမဲ့ သမ္မတ Trump ကတော့ Helsinki ထိပ်သီးညီလာခံ မှာ ရုရှားသမတ Vladimir Putin အကြောင်းအကောင်းပြောခဲ့သလို၊ အမေရိကန် ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလဲ ဆက်ပြီးပြောနေတဲ့အတွက် မျက်နှာပူစရာကောင်းတဲ့အခြေဆိုက်စေပြီး၊ Trump ဟာ Putin ဆန့်ကျင်တဲ့ သူ့အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ထပ်ပြီး ယက်ကန်ယက်ကန် ဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီး Washington Post သတင်းစာကြီးက Trump's anti-Putin advisers are hung out to dry, again ဆိုတဲ့ ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
When John’s car broke down yesterday, he tried calling his friends. But he was left hung out to dry since he could not reach them.
John ရဲ့ ကား မနေ့က ကားပျက်တော့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို ဖုန်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ ဘယ်သူကမှ ဖုန်းမဖြေခဲ့ကြလို့ သူလည်း ယက်ကန်ယက်ကန် ဖြစ်ခဲ့တယ်။
(၂) Play into one’s hand
Play into (ကစားပြီးရောက်သွားတာ)၊ one’s hand (လူတဦးရဲ့ လက်) ဖြစ်ပြီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က လူတဦးရဲ့  ဖြန့်ထားတဲ့လက်ပေါ်ကို ကစားပြီး ရောက်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က လူတဦးဆင်ထားတဲ့ အကွက်ထဲကိုသိသိချည်းနဲ့ ဝင်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက ဖဲကစားရာကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး၊ ဖဲဝိုင်းမှာ ဖဲကစားသူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဖဲချပ်ရအောင် ဖဲခေါ်ပြီး ကစားလေ့ရှိရာမှာ၊ တခါတရံ လဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဖဲကို ချပေးတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဆိုက်တဲ့အတွက်၊ ဖဲခေါ်သူဆင်ထားတဲ့အကွက်ထဲဝင်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို အမေရိကန် သတင်းမီဒီယာဆက်ဆံရေး တင်းမာနေတဲ့ သမ္မတ Trump က မကြာသေးမီက Pennsylvania လူထုစုဝေးပွဲတခုမှာ သတင်းသမားတွေကိုဖိတ်ပြီးလူမြင်သူမြင်အောင် နဲနဲမြင့်တဲ့ခုံတန်းမှာနေရာချထားပေးခဲ့ပြီး၊မိန့်ခွန်းထဲမှာ သတင်းသမားတွေ ကို တိုက်ခိုက်ပြောဆိုတိုင်းသူ့ အမာခံပရိသတ်တွေကသတင်းသမားအုပ်စုကို ဝိုင်းအော်ဟစ် ရှုတ်ချခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခုလိုဝိုင်း အအော်ခံရအောင် Trump ဆင်ထားတဲ့ အကွက်ထဲ သတင်းသမားတွေ ဝင်သွားတယ်ဆိုပြီး Washington Post သတင်းစာကြီးက “Journalists are playing into Trump's hand” ဆိုတဲ့ ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Don’t play into Joe’s hand by accepting his bribe. You will regret it later.
Joe လာဘ်ထိုးတာကို လက်ခံပြီး သူ ဆင်ထားတဲ့အကွက်ထဲ မဝင်မိစေနဲ့။ နောင်တရလိမ့်မယ်။
(၃) Give more clout
Give (ပေးတာ)၊ more (နောက်ထပ်)၊ clout က အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးရှိပြီး လက် ဒါမှမဟုတ် တုတ်လိုပစ္စည်းတခုခုနဲ့ ရိုက်တဲ့အား ဖြစ်နိုင်သလို၊ လွှမ်းမိုးနိုင်မှု အာဏာပိုရှိနေတာကိုလည်း ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကရိုက်ချက်ပိုပြင်းစေတာ၊ လွှမ်းမိုးနိုင်မှု၊ ချုပ်ကိုင်နိုင်မှု ပိုရှိစေတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကလည်း သိပ်မကွာလှပါဘူး။ အသာစီးရနေတာ၊ လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်မှုပိုရှိစေတာ၊ ဖိအားပေးနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးကို ရောက်နေတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီအသုံးကို အီရန်အပေါ် အမေရိကန်က ထပ်မံချမှတ်လိုက်တဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ မှုတွေကြောင့် အီရန်ရဲ့ရေနံအပေါ်အ၀ယ်ကျဆင်းပြီး၊ ရေနံဈေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်ရာမှာ ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ ရုရှားတို့ကို အသာစီး ရစေတဲ့အတွက် ရေနံဈေးနှုန်းတွေတက်တာကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်ဆိုပြီး၊ CNBC သတင်းဌာနက “Trump’s Iran sanctions just gave Saudi Arabia and Russia more clout in the oil market, so watch for higher prices” ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
John’s position asalabor union leader gave him more clout in dealing with the factory workers.
John ဟာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင် ရာထူး ကြောင့် စက်ရုံအလုပ်သမားတွေနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ ပြောနိုင်ဆိုနိုင်အား ပိုရှိတာတွေ့ ရတယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ idioms အသုံးတွေက Hung out to dry, Play into one’s hand နဲ့ Give more clout တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။